Waa maxay WeTransfer iyo sida ay u shaqeyso | Wararka Daaqadaha
Waa maxay WeTransfer iyo sida ay u shaqeyso
Marka ay timaado in la wadaago faylasha waaweyn, annaga ayaa gacanta ku hayna xulashooyinka kala duwan. Midka ugu horreeya iyo kan ugu badan ee la isticmaalo waa in la isticmaalo madal kaydinta daruuraha. Midda labaad waa in la isticmaalo USB stick ama hard drive dibadda ah iyo tan saddexaad waa in la isticmaalo madal sida WeTransfer.
WeTransfer waa madal noo ogolaata inaan wadaagno faylal waaweyn anagoo aan isticmaalin madal kaydinta daruuraha ama aaladaha kaydinta jirka sida ulaha USB ama darawallada adag ee dibadda. Hadii aad rabto inaad ogaato waa maxay WeTransfer, sida ay u shaqeyso iyo dhammaan xulashooyinka ay na siiso, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhrinta.
1 Waa maxay WeTransfer
2 Maxay koontada WeTransfer ee bilaashka ahi na siisaa
3 Waxa koontada lacag bixinta ee WeTransfer ay ina siiso
4 Sida loola wadaago faylasha WeTransfer
5 Sida loo soo dejiyo faylasha WeTransfer
6 WeTranfer ee aaladaha mobilada
7 Beddelka WeTransfer
Waa maxay WeTransfer
WeTransfer, sida Dropbox ee qaybta kaydinta daruuraha, waxay ahayd madal ugu horeysay si ay u noqdaan caan suuqa ugu jira in la wadaago faylasha waaweyn. Qaybta faylalka waaweyn, waxaan ka hadli karnaa fiidiyowyada, faylalka la cufan ...
Madalkan waxay noo ogolanaysaa inaan ku wadaagno faylasha ugu badnaan 2 GB koontada bilaashka ahHalka nooca lacagta la bixiyay, xadka lagu dejiyay 20 GB.
Haddii ujeeddadaadu tahay wadaaga faylasha ka yar 100 ama 200 MB, waxaad ku samayn kartaa si fiican iyada oo loo marayo madal kaydinta bilaashka ah sida Google Drive, OneDrive Microsoft, iCloud Apple ama xitaa Dropbox.
WeTransfer waxay noqotay halbeegga suuqa marka ay timaaddo wadaagga faylalka waaweyn ee internetka mahadsanid fudeydkeeda.
Qaata faylka aan rabno inaan wadaagno sida kaliya ku dhufo linkiga in madalku kuu soo diri doonto marka ay dhamaato gelinta faylka server-keeda.
Wax kale ma jiraan. Ma ahan inaan wadaagno xiriiriye, ku dheji daruurteena si aan hadhow u tirtirno ...Uma baahnid inaad wax aqoon ah u leedahay si aad u isticmaasho WeTransfer in la wadaago faylal waaweyn.
Maxay koontada WeTransfer ee bilaashka ahi na siisaa
WeTransfer waxay u dhalatay sidii madal loogu talagalay wadaaga faylasha gabi ahaanba bilaash, laakiin, sida caadiga ah, adeeggu waa inuu balaadhiyaa bixintiisa oo uu bixiyaa nidaam lacag-bixineed si uu u awoodo inuu sii wado adeegga.
Hadda, WeTransfer waxay na siisaa qorshe bilaash ah oo aan kula wadaagno faylasha a 2 GB xadka ugu badan ee faylka. Dhammaan macluumaadka aan ku dhejineyno goobtan si aan u wadaagno waa la heli karaa 7da maalmood ee soo socda qof walbana waan la wadaagi karnaa xiriirka.
7 maalmood ka dib, nuxurka aanu wadaagnay waa si joogto ah looga saaray goobta mana jirto fursad dib loogu soo celin karo.
Waxa koontada lacag bixinta ee WeTransfer ay ina siiso
Haddii aad u baahan tahay inaad wadaagto faylal ka badan 2 GB, waa inaad doorataa qorshaha lacag bixinta. Nooca WeTransfer PR waxaa ku jira 1 TB oo kayd ah, kaas oo aan ku kaydin karno dhammaan faylasha aan rabno in aan wadaagno iyada oo aan la tirtirin wakhti go'an ka dib iyada oo ugu badnaan 20 GB halkii fayl.
Sidoo kale, wuxuu noo ogolaanayaa inaan abuurno URL gaar ah, ilaali soo dejinta xiriiriyeyaasha sirta ah, shaqo ku habboon haddii aan si qalad ah faylka ugu dirno qof aan ahayn inuu galo. Qiimaha koontada WeTransfer Pro waxaa lagu qiimeeyaa 120 euro sanadkii, inkastoo sidoo kale lagu heli karo lacag-bixinno bille ah oo ah 12 euro.
Sida loola wadaago faylasha WeTransfer
Sidaan kor uga hadlay, la wadaaga faylal waaweyn WeTransfer waa a hab aad u degdeg ah oo fudud, taas oo aan loo baahnayn in la yeesho xirfado kombuyuutar.
Haddii aad rabto la wadaag faylasha waaweyn madal kanWaa kuwan tillaabooyinka la raacayo:
Marka hore, waa inaan gal boggaaga gujinaya xidhiidhkan.
Kadib waxaanu dooranaa faylka in aan rabno in aan wadaagno.
Haddii ay tahay faylal badan, sida albam sawireed, waxaa lagula talinayaa in lagu cadaadiyo fayl si looga fogaado in fayl lagu shubo.
Kadib Waa inaan ku darnaa iimaylkayaga iyo iimaylka ciwaanka heli doona xidhiidhka oo qor fariin haddii aan rabno inaan ku darno.
Tallaabada xigta, waxay muujinaysaa laba ikhtiyaar:
Ku dir wareejinta boostada. Doorashadani waxay fariin u diri doontaa qaataha iimaylka ee aanu ku qornay xidhiidhka soo dejinta.
Hel isku xidhka wareejinta. Doorashadani waxay noo ogolaanaysaa inaan helno ciwaanka faylka aan ku dhejinay goobta wadaagga
Sida loo soo dejiyo faylasha WeTransfer
Haddii aad rabto soo deji faylasha ku jira isku xirka WeTransfer, waa inaan fulinaa tillaabooyinka aan hoosta kugu tusinayo:
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah dhagsii xiriirka. Xiriirintaas waxay tusi doontaa dhammaan faylasha la wadaagay.
Marka xigta, dhagsii taariikhda hoos ka muuqda dhanka midig ee faylka.
Sida aan ku sheegay qaybta hore, waxaa habboon in la isku qaso dhammaan faylasha aan rabno inaan wadaagno si loo soo dejiyo dhaqso iyo in uusan jirin wax fayl ah oo ka tagay jidka.
Dabcan, waxa kaliya ayaa ah taas soo dejinta faylasha ayaa noqon doona mid gaabis ah in haddii aan galno faylal madaxbannaan.
WeTranfer ee aaladaha mobilada
Sida adeeg wanaagsan oo u qalma milixdeeda, WeTransfer sidoo kale waxaa lagu heli karaa qaab ahaan barnaamijka mobilada, taas oo noo oggolaan doonta si fudud u wadaagto faylasha waaweyn, sida muuqaalo aan duubnay.
Sidan oo kale, Looma baahna inaad isticmaasho fariimaha WhatsApp, taas oo ku cadaadinaysa fiidiyowyada ka tagaya tayada badan ee habka.
Cadaadiskan ka heli mayno Telegram, maadaama ay noo ogolaato in aan wadaagno sawirada iyo fiidiyowyada labadaba qaabkoodii asalka ahaa, iyada oo aan la isticmaalin nooc kasta oo cadaadis ah.
WeTransfer waa goobta ugu caansan adduunka marka ay timaado wadaagga faylalka waaweyn, si kastaba ha ahaatee, Ma aha ka kaliya ee la heli karo.
Faa'iidada ugu weyn ee ay na siiso burburin waa taas ma jiro xadka cabbirka marka ay timaado in la wadaago faylasha.
Laakin, si ka duwan WeTransfer, qaataha ayaa heli doona isku xirka faylka marka madal ay baarto faylalka kuwaas oo lagu soo diro iyadoo la isticmaalayo qorshaha lacagta lagu bixiyo, markaa hawl-galkoodu ma aha mid degdeg ah.
Doorasho kale oo xiiso leh oo leh xadka ugu badan ee 4 GB es Wareejin, waa madal noo ogolaanaysa inaan ku ilaalino gelitaanka faylasha anagoo adeegsanayna erayga sirta ah waxayna diyaar yihiin ugu badnaan 7 maalmood.
Dhankeeda madal tani waa taas Waxaan kaliya wadaagi karnaa faylasha 5 jeer maalintii. Si kale haddii loo dhigo, haddii aan rabno in aan la wadaagno in ka badan 5 qof, 5 ugu horreeya ee helaya waxay awoodi doonaan inay soo dejiyaan waxa ku jira maalinta ugu horreysa, inay sugaan inta kale maalmaha soo socda.
Hantida ugu weyn ee MyAirBridge waa in ay noo ogolaato la wadaag faylasha xadka 20 GB. Nuxurka xun ayaa ah in marka faylka la soo dejiyo, si toos ah looga tirtiro server-yada, markaa hal mar oo keliya ayaa la wadaagi karaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Windows » Software » Waa maxay WeTransfer iyo sida ay u shaqeyso
Sida loo soo dejiyo oo loogu rakibo VLC gudaha Windows 11
Markaa waad soo dejisan kartaa oo ku rakibi kartaa Microsoft PowerToys gudaha Windows 11